Filtrer les éléments par date : samedi, 06 juillet 2019
samedi, 06 juillet 2019 12:24
Primatiora - Mahazoarivo: Nohavaozina mba hanara-penitra ny kianja « Escadron Porté N°01”
Tafiditra ao anatin’ny fanarenana ny firenena isika izao, ary izay indrindra no nitondrana fanavaozana ity fotodrafitrasa eo anivon’ny tobin’ny Zandarimariam-pirenena “Escadron Porté n°01” eo Mahazoarivo ity, mba hanara-penitra, hoy ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, raha nitokana azy omaly.
“Tsy kisendrasendra izao fanamboarana izao, fa ity Toby ity, raha ara-tantara, no voalohany nahorina ka rariny raha apetraka amin’ny toerana maha izy azy, ary inoako fa hamoaka mpilalao matihanina amin’ny taranja baskety, hitondra ambony ny voninahitry ny firenena atsy ho atsy”, hoy hatrany ny Praiminisitra.
Miditra amin’ny andiany faha-21 ny FIER MADA na ny tsenabe iraisam-pirenena ho an’ny toe-karena eny amin’ny tontolo ambanivohitra, izay hotanterahina ny 7 ka hatramin’ny 11 aogositra 2019 eny amin’ny stade MAKIS Andohatapenaka.
“Fandrosoana maharitra: Tetikasam-panjakana vatsiana vola amin’ny harena voajanahary sy ifampierana eny amin’ny tantsaha eny ifotony” ny lohahevitra havoitra ho amin’ity andiany ity.
Hetsika ara-barotra ny FIER MADA ho fampivoarana ny toe-karena eny amin’ny tontolo ambanivohitra, ary koa hahafahan’ny mpisehatra rehetra ao anatin’ny famokarana mivondrona, mifanerasera, mifanakalo hevitra, mifampizara traikefa na fomba fiasa vaovao ho fanatsarana izay asa fihariana izay.
Misokatra ho azon’ny rehetra tsidihina ireo vakoka malagasy voatahiry ao amin’ny Lapan'Andafiavaratra. Ireo vakoka tsy may tao amin'ny Rovan'Antananarivo no aranty ho azon’ny daholobe tsidihina ao.
Mpianatra avy amin’ny sekoly manodidina no nisantatra ny fitsidihana ny Lapan'andafiavaratra ny alakamisy teo, notarihin’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Misokatra ho an'ny daholobe ny talata hatramin'ny alahady ny Lapan'Andafiavaratra .
Miaka-bokatra aty Andina. Mitobaka ny voatabia, vokatra natoraly sady tsara kalitao. Fotoanany rahateo izao aty an-toerana. 14 000 Ariary izao ny iray sobika ; miandry mpanangom-bokatra.
Kaominina i Andina, miorina ao amin’ny 17km andrefan’ Ambositra, renivohitry ny faritra Amoron’i Mania. Talata sy zoma ary alahady ny tsena eto, fa ny andro zoma no tena be mpivarotra.
samedi, 06 juillet 2019 08:30
Atletisma - Lalaon’ny Nosy: Mitohy ny fanazaran-tenan’ireo Atleta Malagasy
Mitohy hatrany ny fanazaran-tenan’ireo Atleta Malagasy izay handray anjara amin'ny Lalaon’ny Nosy.
Miisa 34 ireo Atleta Malagasy hiatrika ny Lalaon’ny Nosy andiany faha-X hatao atsy amin’ny Nosy Maorisy ny 19 hatramin’ny 28 jolay 2019. Mpanazatra miisa 5 no hanaraka azy ireo any.
Anatin’ny fampivondronana ary manoman-tena etsy amin’ny Kianjan’Alarobia ny 21 amin’izy ireo, nalefa any Chine kosa ny 13 ambiny, tafiditra anatin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana Malagasy sy Sinoa.
Anisan’ny taranja manan-danja, antenaina hampisongadina ny Malagasy ny atletisma ary andrandraina hahazoana medaly maro indrindra.
samedi, 06 juillet 2019 08:25
Andranovory – Toliara II: Basy kalachnikov iray tafaverina
Basy Kalachnikov iray indray no azon'ny Vondrotobim-pileovana (Groupement) Zandarimaria Atsimo-Andrefana ny alakamisy 04 jolay tao Anketa/Tanindraza, Kaominina Andranovory, Distrika Toliara II, nandritra ny fitsidiham-paritra nataon'ny Kolonely Komandin'ny Groupement ao anatin'ny hetsika fampandrian-tany.
Tafiditra ao anatin’ny hetsika hanangonana ireo basy mahery vaika any ampelatanan'ireo izay tsy nahazo fahazoan-dalana amin’izany izao vokatra izao mba hampandriana ny fahalemana.
samedi, 06 juillet 2019 08:19
Fifamoivoizana anabakabaka: Sidina mivantana Antananarivo - Mumbai
Nihaona tamin’Atoa Razafimaharo Rolland Besoa, Tale Jeneralin'ny Air Madagascar, ny zoma 05 jolay, Atoa Abhay Kumar Ambasadaoron’i Inde eto Madagasikara. Noresahin’ny roa tonta ny momba ny mety hisian'ny sidina mivantana izay hampitohy an’Antananarivo sy Mumbai.
samedi, 06 juillet 2019 08:05
Kitra – CAN 2019: 471 ireo mpanohana ny Barea hanainga anio alina
471 ireo hiainga an-tranindrazana anio alina, hanohana ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra mandritra ny lalao ampahavalon-dalana amin'ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika, hifandonany amin’ny Léopard an’i Repoblika Demokratikan’i Congo.
Nasain'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina manokana ny 50 amin' izy ireo, ka anisan'ireo ny Zaza Kanto, ny avy ao amin'ny Akamasoa, ny mpitsoka mozikan'ny Tafika Malagasy, ny « mascotte » Barea, ireo mpilalao taloha avy ao amin'ny ekipam-pirenena, ary ireo solon-tena avy ao amin'ny Club des supporters an'ny Barea.
Tafiditra ao anatin'ny sarandalana izay nalohan'ireo mpandeha ny fitaterana azy ireo any an-toerana, ny sakafo sy ny tapakila idirana hijerena ny lalao.
Anio sabotsy 6 jolay amin'ny 11 ora alina no hanainga eo Ivato ny fiaramanidina A380 hitondra ireo delegasiona ireo ho any Egypta; ary ny alatsinainy 8 jolay maraina izy ireo no tafaverina eto an-tanindrazana.